Qaad bay isku khilaafeen kaddibna qori buu u doontay! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Qaad bay isku khilaafeen kaddibna qori buu u doontay!
Qaad bay isku khilaafeen kaddibna qori buu u doontay!
(Hadalsame Media) 08 Luulyo 2018 – Qaad ayey soo wada iibsadeen oo farxad gogol u wada fariisteen. Sheeko la dheeraatay ayaa la isku maandhaafay. Hadalkii wuxuu isu beddelay gacan. Mid baa gacantii ku fillaan weydey oo hub doontay oo subixii xigey kii kale suuqa ku dilay.
Wax dil ismuu lahayn. Waxgaradkii kan wax dilay, waxay dhacdadii ku xireen mid tobaneeyo sano ka hor dhacday oo iyagaaba gar sheegtay. Wadahadalkii waa jiitamatay.
Kii la dilay walaalkii ayaa tebey maqnaanshaha walaalkii. Qori ha doonto oo kii wax dilay oo makhaayad fadhiya baas ha ku furo. Dhawr aanu aqoon iyo kiiba nafta ha dhaafiyo. Afarta jiho ciidanku ha isaga yimaado. Qurbajoog xanaaqsani telefoonka ha dhigi waayaan.
Dumarkii oohinta ha ku daraan inay waagii hore magac lahaan jireen. Ciilka iyo maashu ha foocaan. Gawaarida maatada qixinaysa iyo kuwa gurmadka soo sidaa ha is weydaartaan. Arooryo hore shanqartu dhinac ha ka soo bilaabato. Meydka laga tallaabsanayo ha loo abtiriyo. “Naaskii hooyadii baa qabtay” ha la yiraahdo. Qurbajoogtu “Annagaa haysanna” iyo “Waa ka saarnay” ha isku maaweeliyaan.
Odayaal mariid la weynaaday taariikho baas ha soo qufaan. Colaaddu inay hadda kow tahay, weligeedna jiri doonto ha ku sheekeeyaan.Tobaneeyo sano oo dambe maalinba goosan ha la laayo. Markii la kala adkaan waayo dantu ha meeriso in heshiis loo wada guuxo. Dagaalku siduu ku soo bilawday ha la garan waayo. Geeridu intay marayso ha la xisaabin waayo.
Maalintay wiil xanaaqay joogtay, in la qaboojiyaa dhawaydaa!
Waa muuqaal aan waqti iyo meel lahayn. Maya. Waa muuqaal meel walba iyo goor walba Soomaali dul hoganaya.
Qore: Cabdul Qaadir Diiriye
Previous articleReysal wasaare kheyre oo sheegay in dowladu qaadi doono dadka qaba dhaawacyada halista ah
Next articleDAAWO: RW Abiy Ahmed oo goor dhow ka degey magaalada Asmara + Sawirro